Umphathi wefayela; ukuthi iyini, imisebenzi nezinye izindlela - VidaBytes | I-LifeBytes
U-Iris Gamen | 01/06/2022 22:03 | Aplicaciones
Ngayinye yefayela le- amasistimu wokusebenza akhona namuhla, asebenza ngohlelo oluchazwe ngaphambilini lokuphatha okuqukethwe okuhlukahlukene kwesitoreji. Enye yezinzuzo ezinkulu i-Android enazo ukuthi inokuguquguquka okukhulu uma kuziwa ekuphequluleni amafolda okugcina. Kufanele kuphela uxhume idivayisi yakho yeselula ekhebulani le-USB futhi lokhu ku-PC. Ngale ndlela ningakwazi ukuhlela nokudlulisa amafayela owadingayo.
Kokuthunyelwe okukhona manje, sizobhekana nesihloko sokuthi yini umphathi wefayela futhi yiziphi ezihamba phambili. Sizogxila kakhulu kukho konke okuphathelene namadivayisi we-Android. Kumadivayisi ethu amaningi eselula noma amaphilisi, imenenja yefayela ivamise ukufakwa njengokujwayelekile, okubi kwalokhu ukuthi eziningi zazo ngokuvamile ziyisisekelo kakhulu futhi kudingeka enye engcono.
Ukuze uthole ukusebenza okuhle kakhulu kulezi zinhlelo zokuphatha amafayela, abasebenzisi abanawo bazoba kuvunyelwe ukugcina, ukuhlela, ukususa noma ukukopisha wonke amafayela owafunayo, kanye nokukwazi ukufinyelela kuzo ngaphandle kwenkinga.
1 Yini umphathi wefayela?
2 Yini engenziwa umphathi wefayela ohlanganisiwe?
3 Okubi komphathi wefayela ojwayelekile
4 Abaphathi befayela abahamba phambili
4.1 I-Astro File Manager
4.3 Uhlelo lokusebenza Lwesiphathi Sefayela
4.4 Umhloli wamazwe oqinile
4.5 Umlawuli ophelele
Yini umphathi wefayela?
Abaphathi befayela be-Android nezinye izinhlobo zamadivayisi eselula banokufana umsebenzi, hlela amafayela ahlukene futhi ikuvumela ukuthi uphathe amafayela ngendlela elula kakhulu esinakho endaweni yethu yokugcina.
Kumakhompyutha, lolu hlobo lomlawuli seluvele lufakiwe, kodwa lokhu akwenzeki kwamanye amadivaysi eselula, amaphilisi, njll. Imenenja yefayela ayihlali ifika ngokuzenzakalelayo.
Uma ngenhlanhla, kudivayisi yakho kufika a isistimu yefayela ekhishwe, uzoba nethuba lokuyishintsha ngokushesha okukhulu futhi kungokudawuniloda nokufaka uhlelo lokusebenza lwale njongo.
Yini engenziwa umphathi wefayela ohlanganisiwe?
Ukuba nomphathi wefayela ofihliwe kudivayisi yakho ye-Android ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwezilungiselelo kuphakamisa ukuthi inkampani ifuna ukuvimbela laba basebenzisi ukuthi bangathintani nesistimu yefayela. Esinye sezizathu eziyinhloko eziholele kulesi sinyathelo ukuvikeleka, kusukela izinguquko ezakhiweni zamafayela agciniwe zingabangela ukuthi imisebenzi ethile ime ukusebenza.
Uma ufuna ukuyifinyelela usuka kudivayisi yakho, kuzodingeka ukuthi ufake inketho yezilungiselelo, useshe bese ukhetha okuthi "Memory and USB", bese ufinyelela "Inkumbulo yangaphakathi" bese ekugcineni uchofoza okuthi "Hlola". Uma une vula isihloli, uzokwazi ukubona wonke amafolda agcinwe ngaphakathi kwememori yangaphakathi yedivayisi yakho.
Uyoba nethuba lokushintsha ukubuka kwegridi, ukuhlunga ngegama, usuku noma usayizi futhi ungakwazi ngisho nokusesha lapho uqala umsebenzi oshiwo kumphathi. Ukuze ufinyelele okuqukethwe kwamafolda, kufanele uchofoze noma iyiphi yawo.
Njengoba sishilo esigabeni esidlule, ngenxa yemisebenzi ehlukene yokuhlela umphathi wefayela anayo, uzokwazi ukukhetha amafayela, uwasuse, uwakopishele kunoma iyiphi indawo noma wabelane ngawo kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Okubi komphathi wefayela ojwayelekile
Ohlwini olulandelayo, uzothola uchungechunge lwe amaphuzu amabi abaphathi bamafayela abaningi ababelana ngawo nokuthi kungadingeka ukuzithuthukisa ukuze kube nenhlangano engcono kanye nokuqondiswa komsebenzisi.
Abaphathi bamafayela ajwayelekile ayinawo umsebenzi wokusika, ukuze ukwazi ukuhambisa ifayela lisuka kwelinye ifolda liye kwenye, okuwukuphela komsebenzi ongenzeka ukukopisha. Lapho senza umsebenzi wokukopisha, esikwenzayo ukuphindaphinda ifayela elithile ngokuba nalo kabili, kanye kufolda yasekuqaleni, okufanele siyisuse, nenye kufolda ekhethiwe.
Iphuzu lesibili elibuthakathaka esilitholayo ukuthi awukwazi ukuqamba kabusha amafolda noma amafayela, amagama aphelele nawoqobo ahlala eboniswa, kodwa awakuvumeli ukuwashintsha ukuze kube nomehluko ongcono.
Ezimweni eziningi, awekho amafolda amasha angadalelwa inhlangano engcono kumafayela agciniwe, ungasebenzisa kuphela amafolda asevele enziwe.
Okokugcina, phawula ukuthi ukube ibinohlelo lokugcina amafayela alayishwe efwini, kungakhathaliseki ukuthi ku-Dropbox, Drive noma kwamanye, ukuphathwa kwalawa mafayela kanye nalawo enkumbulo yangaphakathi yedivayisi bekuyoba kusengaphambili okukhulu.
Abaphathi befayela abahamba phambili
Ukuze sikwazi ukwenza ngendlela oyifisayo isistimu yethu yefayela, sincoma ukuthola enye indlela yomphathi ojwayelekile, okuthi, njengoba sibonile esigabeni esidlule, ingaba nochungechunge lwezinkinga. Kulesi sigaba, sethula a ukukhetha okufushane kwabanye abaphathi bamafayela abanconywe kakhulu.
I-Astro File Manager
Enye yezinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu phakathi kwabasebenzisi, nobani ukukwazi ukuhlela wonke amafayela kusuka kumemori yangaphakathi kanye nekhadi le-SD kanye nefu. Imahhala ngokuphelele, futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi inezinhlobonhlobo zemisebenzi.
Imenenja yefayela le-Google, ene-interface elula kakhulu. Kuzokuvumela, phatha okuqukethwe okulondolozwe kudivayisi yakho, kodwa ngeke wazi indawo eqondile yamafayela. Ungakwazi futhi ukuvula isikhala ngokususa amafayela nezinhlelo zokusebenza, uphathe amafayela futhi wabelane ngawo namanye amadivaysi.
Uhlelo lokusebenza Lwesiphathi Sefayela
Njengoba igama layo libonisa, lolu hlelo lokusebenza Inayo yonke imisebenzi etholakalayo yokuyiphatha egcinwe ngendlela engcono kakhulu. Ithuluzi lamahhala nelinamandla ongaphatha ngalo amafayela akho alayishwe emafini.
Umhloli wamazwe oqinile
I-classic yangempela kumaselula e-Android, okuthi ngokuhamba kwesikhathi ibithuthukisa imisebenzi yayo nokuklama. Ngenxa yale misebenzi esikhulume ngayo, unethuba lokudala amafolda noma amafayela amasha. Ngaphezu kwakho konke lokhu nokukwazi ukukuphatha, ungakwazi ukufinyelela amafayela agcinwe efwini.
Asitholi nje kuphela inguqulo yayo yedeskithophu, kodwa futhi inohlelo lokusebenza lwabasebenzisi be-Android. Mayelana namathuluzi okuphatha amafayela, ingenye yezinketho ezinhle kakhulu. Inokuphathwa kwefayela kumawindi amabili, ukukhetha okuningi, izinketho zokuqamba kabusha, amabhukumaka, nokunye okuningi.
Ngalawa mathuluzi okuphatha, ngeke nje uthuthukise ukuhlelwa kwamafayela akho, kodwa uzoba nokulawula okwengeziwe lapho ngalinye lawo litholakala khona ukuze ukwazi ukuwabona ngokushesha ngokuzayo.
Sihlale sikutshela okulandelayo futhi namuhla bekungeke kube ngaphansi, ukuthi uma ucabanga ukuthi uyazi umphathi wefayela othize oye wazama futhi ukunikeze imiphumela emihle, ungangabazi ukushiya endaweni yokuphawula.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Aplicaciones » Umphathi wefayela; kuyini, imisebenzi nezinye izindlela